Wararkii ugu Dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda maanta ka qoreen wargeysyada %
Wararkii ugu Dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda maanta ka qoreen wargeysyada
By Ramzi Yare	 On Jan 3, 2019
Suuqa bisha January ayaa si rasmi ah u furmay, waxaana lagu jiraa maalintii saddexaad
Haddaba halkan ayaa idiinku soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoy ee ay maanta oo ka qoreen wargaysyada
Aaron Ramsey ayaa Cristaino Ronaldo kula biiri kara kooxda Juventus iyada oo maamulka kooxda Juventus ay xaqiijiyeen in ay xiisaynayaan xidiga Wales, waxayna u muuqaa in siyaasadii cajiibka ahayd ee Juventus ay hadda guulaysanayso maadaama oo ay koox layaableh kula soo wareegtay si xor ah.
Kooxda Bayern Munich ayaa 10 milyan gini oo dheeraad ah ku soo kordhisay dalabkii ay Chelsea hore uga soo diiday ee ay ku doonaysay Callum Hudson-Odoi waxayna Bayern hadda dalab 30 milyan ah u dirtay Chelsea si ay sare ugu qaado dalabkii hore ee 20 milyan ginida ahaa ee ay maamulka Blues soo diideen sida lagu daabacay The Sun.
Xidigii diirada u saarnaa kooxaha Real Madrid iyo Barcelona ee Christian Eriksen ayaa joojiyay wada xaajoodkii heshiis kordhina ee uu kula jiray kooxdiisa Tottenham iyada oo qandaraaskiisu uu dhacayo 18 bilood kadib sida uu qoray wargayska Evening Standard.
Xidiga aan booska joogtada ah Barcelona ku haysan ee Malcom ayaa xiiso ka helay kooxda Barcelona xidigaha badan kala soo wareegtay ee Everton. Malcom ayaan fursad fiican helin tan iyo markii uu suuqii xagaagii la soo dhaafay ka soo wareegay kooxda Bordeaux, laakiin Everton oo Barca ka soo qaadatay Yerry Mina, Andre Gomes iyo Lucas Digne ayaa markale doonaysa in ay Malcom kala soo wareegto sida uu qoray Marca.
Laakiin Everton ayaan kali ku hayn xiisaha Maclom waxaana doonaysa kooxda Chinese Super League ee Guangzhou Evergrande oo haddaba dalab 50 milyan euros ah ka soo gudbisay Malcom inkasta oo aan la filayn in Barcelona ay waqtigab iibin doonto xidiga reer Brazil.
Da’yarka kooxda Chelsea ee Tammy Abraham oo 21 sano jir ah ayaa heshiis 18 milyan gini ah ugu biiri kara kooxda Wolves oo dalab ka soo gudbisay wuxuuna Tammy Abraham soo kansali doonaa heshiiska amaahda ah ee uu hadda ku joogo Aston Villa sida uu qoray The Sun.
Kooxda PSG ayaa 50 milyan gini ku doonaysa xidiga kooxda Watford ee Abdoulaye Doucoure iyada oo 26 sano jirkan hore loola xidhiidhinayay kooxaha waa wayn ee Premier league laakiin Watford ayaan doonayn in xataa 50 milyan uu Abdoulaye Doucoure ay ku iibiso bishan January.
Kadib markii ay Chelsea isku hubsatay saxiixa Christian Pulisic, maamulka Blues oo markan u dhaqaaqaya saxiixa gool dhaliyaha kooxda Bournemouth ee Callum Wilson oo 26 sano jir ah balse waxay sidoo kale Blues doonaysaa in ay difaacna kooxdeeda ku soo xoojiso sida uu qoray Daily Mirror.
Fabregas ayaa xalay u muuqday in uu magacasalaameeyay kooxdiisa Chelsea iyada oo la filayo in uu ku biiri doono kooxda Henry hogaaminayo ee AS Monaco laakiin jamaahiira Chelsea oo kooxdooda ku oriyay ayaa fariimo badan ku dalbaday in Fabregas aanu kooxda ka bixin.AKHRISO WARKA OO FAAH FAAHSAN.
Liverpool ayaa doonaysa in ay heshiis cusub ka saxiixato gool dhaliyaha aan booska joogtada ah kooxdeeda ku haysan ee Daniel Sturridge kaas oo si xor ah Anfield kaga bixi kara dhamaadka xili ciyaareedkan haddii aan heshiis cusub laga saxiixan.
Reds ayaa doonaysa in halkii Sturridge uu bilaash kaga bixi lahaa in ay sii haysato si ay xataa u iibin karto xagaaga haddii loo baahdo.
Arsenal ayaa dalab 16 milyan yuro ah ka gudbisay goolhayaha kooxda Real Madrid ee Keylor Navas kaas oo booskiisii u lumiyay Coutois, waxayna Gunners doonaysaa in ay 32 sano jirkan la soo saxiixao sida uu qoray Sport.
Manchester City ayaan bishan January la soo saxiixan doonin ciyaartoy ay ku kaabto Fernandinho kaas oo marka uu dahawac soo gaadho ay dhibaato soo maraysay City balse sida uu qoray ESPN, Guardiola ayaan saxiix khadka dhexe ah samayn doonin suuqa bishan January.
Thierry Henry ayaa doonaya in uu kooxdiisa Monaco ku soo xoojiyo Mamadou Sakho oo Crystal Palace u ciyaara iyo Cesc Fabregas oo ku sii dhawaanaya in uu Chelsea ka baxo wuxuuna Henry doonayaa in khibrada labadan xidig uu ku xalin karo dhibaatada kooxdiisa AS Monaco sida lagu qoray RNE.
Difaaca kooxda Arsenal diirada u saarnaa ee Gary Cahill ayaa ku biiri kara kooxda kooxda Fulham taas oo ku sii dhawaanaysa in ay Chelsea heshiis amaah ah kaga qaadato Cahill oo boos ka waahay kooxda Sarri. (Evening Standard)
Kooxda AC Milan ayaa xiisaynaysa gool dhaliyaha kooxda Southampton iyo xulka qaranka Talyaaniga ee Manolo Gabbiadini kaas oo 27 sano jir ah isla markaana doonaya in uu Saints ka baxo. (Calciomercato)
Heshiiskii uu gool dhaliyaha Liverpool ee Dominic Solanke ugu biiri lahaa kooxda Crystal Palace ayaa burburay laakiin kooxda horyaalka Germany ee Schalke 04 ayaa xiisaynaysa saxiixa Dominic Solanke. (Bild)
Eden Hazard ayaa doonaya in uu heshiis cusub u saxiixo kooxdiisa Chelsea inkasa oo ay Blues heshiis la gaadhay xidiga kooxda Dortmund ee Christian Pulisic iyada oo Blues hadda haysata fursada ay kooxdeeda ugu wada haysan karto Hazard iyo Christian Pulisic sida uu qoray wargayska The Sun.
Warar soo baxay ayaa sheegaya in sababtii ay Liverpool kaga baxday tartankii Christain Pulisic ay ahayd in bandhiga Xherdan Shaqiri uu ahaa mid door wayn ka ciyaaray in Liverpool ayna xidig kale oo weerarka ah u baahnayn waqigan.
Klopp ayaa tilmaamay in Xherdan Shaqiri uu maalinba maalinta ka danbaysa ka sii fiicnaanayo isla markaana uu ku ciyaari karo heerkii Philippe Coutinho oo sanad ka hor ka baxay Liverpool.
Ole Gunnar Solskjaer Oo Bar-Bareeyay Rikoor 73 Sano U Yaalay Man United Kadib…